किन चुके मेस्सी ?| Nepal Pati
किन चुके मेस्सी ?
- मनोरञ्जन मल्ल ठकुरी
काठमाडौं । प्रतिष्ठाको लागी खेलिने फुटबल अहिलेको समयमा आईपुग्दा पुर्ण रुपमा ब्याबसायिक भैसकेको छ । विश्व विजेता राष्ट्रहरुको सुचि हेर्ने हो भने पनि जुन जुन देशको राष्ट्रिय लिग बलियो र ब्यबसायिक छ त्यहि त्यहि देशहरुले मात्र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता जितेका छन्¸केहि अपबाद बाहेक ।
ब्यबसायिक प्रतियोगीता (क्लव फुटबल) र राष्ट्रिय प्रतियोगिता (देश देशको प्रतियोगिता) लाई एउटै नजर र कोण बाट हेरिनु हुदैन । अघिल्लो दुईवटा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता देखि निरन्तर मेस्सी¸रोनाल्डो र नेमारको नाम अग्रपंत्तीमा आउने गर्छ । आम दर्शक उनीहरुको टिमको हैन नितान्त उनीहरुको ब्यक्तिगत प्रदर्शन हेर्न चाहन्छन । खेलमा उनीहरुकै दवदवा हेर्न चाहन्छन । यो पटकको प्रतियोगितामा लियोनल मेस्सीको जति चर्चा र समाचार अरु कुनै खेलाडिको पनि बनेको छैन ।
संसारको सबै मिडिया¸ सामाजिक संजालहरुमा मेस्सी मात्र छाएका छन । आम दर्शकले जहिले यो चाहे कि मेस्सीले बल छलाउन पर्यो¸मेस्सीले पास निकाल्न पर्यो¸मेस्सीले गोल हान्न पर्यो तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यस प्रकारको ब्यापक दवाबको कारण जुनसुकै खेलाडीको प्रदर्शन फितलिने गर्दछ । जुनकुरा आम दर्शकले बुझेका हुदैनन । लियोनल मेस्सी क्लब फुटबलमा बार्सिलोनाका एक कुशल ब्यवसायिक खेलाडी हुन् । क्लवले आफ्नो ब्याबसायिकता बढाउनका लागी उनी जस्ता कयौ खेलाडीलाई मोटो रकममा भित्राएका हुन्छन् । क्लवमा कुनैपनि खेलाडीलाई ब्यक्तिगत रुपमा जित्नैपर्ने दवाब हुदैन् ।
उनीहरु आफ्नै लयमा खेल्ने गर्छन¸ मिलेर खेल्ने गर्छन अनि मात्र उनीहरु पूर्ण ब्यबसायिक खेलाडीमा गनिन्छन । क्लव फुटबलमा हेर्ने हो भने मेस्सी अति नै भलादमी खेलाडीमा गनिन्छन । उनले विपक्षी लाई छकाएर गोल हान्ने अदभुद शैली छ त्यसकारण उनी अहिले सम्म बार्सिलोनाको मुख्य खेलाडीमा गनिन्छन तर जव खेल प्रतिष्ठाको हुन्छ उनी लगायत अन्य ब्यबसायिक खेलाडीहरुले सोचे अनुसारको प्रदर्शन गर्न सक्दैनन ।
लियोनल मेस्सिले २०१४ को प्रतियोगीतामा पनि फाईनलमा क्लव फुटबलमा जस्तो जादु देखाउन सकेनन¸उन्को टिम उप विजेताको रुपमा फर्किनु परेको थियो । उनले हतासिएर राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यासको घोषणा समेत गरे । २०१५ देखि यहि सिजनको स्पेनिस ला लिगामा उन्को प्रदर्शन उच्चस्तरको रहेको थियो¸ उनले निकै उत्कृष्ट गोलहरु पनि गरे तर पुनः एकपटक राष्ट्रिय टोलीबाट उनले कप्तानको भुमिका निर्वाह गरे । फेरि एकपटक उनले क्लव फुटबलमा जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेनन¸फलस्वरुप निकै कष्टपुर्ण तरिकाबाट लिग चरण पार गरेको अर्जेन्टिनाले प्रि-क्वार्टर फाईनलमा फ्रान्ससंग ४-३ को हार ब्यहोर्दै रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भयो ।
आखिर किन चुके त मेस्सी ? किन क्लव फुटबलमा जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेनन ? सानदार प्रदर्शनबाट प्रतियोगिता जितेर पेले र म्याराडोना पछिको महान खेलाडीको सुचिमा नाम लेखाउने मौकाबाट किन चुके मेस्सी ?
प्रतियोगिता सुरु हुनु भन्दा अगाडी र प्रतियोगिताको दौरानमा भएभरका मिडियाले मेस्सीलाई भगवानको जस्तो दर्जा दिलाए । उनी यस्ता खेलाडी¸ उनी यस्तो खेल्छन भन्नमै सबै मिडियाहरु लागिपरे । सामाजिक संजालमा उनका समर्थकहरुले विभिन्न समाचार र ट्रोलहरु मार्फत उन्लाई महान हिरो कै रुपमा उभ्याए । अर्जेन्टिनि मिडिया र दर्शकहरुले पनि कुनैपनि हालतमा मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाएरै छाडछन भनेर उकास्नु उकासे । समाचार उनले पनि पढछन । ¸सामाजिक संजाल उन्ले पनि चलाउछन¸। यहि मेसोमा उनीमाथी कुनै पनि हालतमा जित्नैपर्ने र गोल हान्नै पर्ने दवाब पर्न गयो ।
मेस्सी एउटा मान्छे हुन¸उनीमा क्षमता छ तर उनी कुनै जादुगर हैनन जस्ले हर हालतमा अर्जेन्टिनालाई जिताउनै पर्छ ? त्यहि टिममा डि मारिया जस्ता खेलाडी पनि छन¸ डि मारियाले प्राय जसो खेलमा निकै राम्रो खेलिरहेका हुन्छन र गोल पनि हानिरहेका हुन्छन तर चर्चा जुनबेला पनि मेस्सी कै मात्र आउछ । मरेर कोहि पनि खेलाडीले खेल्दैनन् । चर्चा र परिचर्चाको क्रममा मेस्सी जस्ता खेलाडी विपक्षीको निशानामा पनि पर्ने गर्छन् ।
जसको कारण उनीले क्लव फुटबलमा जस्तो आफ्नै लयमा र टिममा मिलेर प्रदर्शन गर्न सक्दैनन । हिजो सम्म जुन जुन समर्थक र मिडियाले उनलाई मसिहाको दर्जा दिएको थियो आज हार पश्चात उनलाई नालायक भन्न समेत पछि परेका छैनन । क्रोएशिया संगको पराजय पश्चात एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन ले अर्जेन्टिनाको हारमा मौन धारण गर्नु, म्याराडोना जस्तो महान खेलाडीले समेत जुनबेला पनि मेस्सि कै मात्र चर्चा गर्नु अनि सामाजिक संजालहरुमा उन्लाई महान हिरो बनाउनु नै मेस्सी राम्रो प्रदर्शन गर्नबाट चुक्नुको मुख्य कारण हो। प्रतिष्ठा कसैले पनि गुमाउन चाहदैन । ईज्जतमा कसैले पनि दाग लगाउन चाहदैन ।
जसरी पनि ईज्जत जोगाउनै पर्ने दवाबको कारण मेस्सी चुकेका हुन । ब्यबसायीक फुटबलमा हर हालतमा जित्नै पर्ने दवाब हुदैन । एउटै खेलाडीमाथी भर पनि हुदैन । त्यसकारण मेस्सी क्लव फुटबलमा सधै चम्किएका हुन । जित्नै पर्ने चर्को दवाब र एकै खेलाडीमाथी भर पर्दाको परिणामा आफ्नै गृह मैदानमा अघिल्लो संस्करणमा ब्राजिल जस्तो टिमले कसरी जर्मनी संग लज्जास्पद पराजय भोग्नु परेको थियो । यो कुरा सर्वविदितै छ ।